Domain – Support Desk
Domain တစ်ခုဝယ်ယူလိုလျှင် ဘာတွေလုပ်ဆောင်ရမလဲ?
Domain ဝယ်ယူလိုလျှင် Z.com Website တွင်ဝင်ရောက်ပြီး မိမိတို့လိုချင်သော Domain name အား ပထမဉီးစွာ စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်…. မိမိလိုအပ်သော Domain name သည် Available ဖြစ်ပါက Order တင်၍ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်….
Domain ဝယ်တာနဲ့ Website /Email တွေကို အသုံးပြုလို့ရနိုင်သလား?
Website တွေ Email တွေ အသုံးပြုလို့မရနိုင်သေးပါဘူး... Domainဆိုသည်မှာ Internet address တစ်ခုသာဖြစ်သည့်အတွက် Website အသုံးပြုရန် Web Server လိုအပ်ပြီး၊ Email Address အသုံးပြုရန် Email Server လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်...Domain ဖြင့်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရန် Server မရှိပါက ထပ်မံဝယ်ယူရန်လိုအပ်ပါသည်...
ဝယ်ယူထားသော Domain ကိုမည်သို့အသုံးပြုနိုင်သလဲ?
Domain အား Web Server/ Mail Server များချိတ်ဆက်၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ….
အခြား Domain provider များမှ ဝယ်ယူထားသော Domains များအား Z.com သို့ရွေ့ပြောင်းနိုင်ပါသလား?
ရွေ့ပြောင်းနိုင်ပါတယ် သို့သော် Domain၏သက်တမ်းအနည်းဆုံး တစ်လခန့်ကျန်ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်…
Domain Waiting Authenticating Status
Domain Waiting Authenticating Status ဆိုတာ Domain provider ဘက် Domain owner ဆီသို့ confirmation ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သော အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်. Domain owner အနေဖြင့် မိမိ email ထဲဝင်ရောက်ရှိနေသော verification link အားနှိပ်၍ Confirmation လုပ်နိုင်သည်. ပြုလုပ်ပြီးပါက အချိန်အနည်းငယ် စောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်သည်...
Domain တစ်ခု၏ Name Server အား ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်သလား?
Name Server အားပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်… Domain တစ်ခု NameServer ပြောင်းလဲရာတွင် Update ဖြစ်ရန် အများဆုံး ၇၂ နာရီစောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်ပါသည်… NameServer မပြောင်းလဲမီ DNS Record များအား backup သိမ်းထားရန်လိုအပ်သည်…
Domain၏ Registrant Information များ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသလား?
Registrant Information အားပြောင်းလဲနိုင်သည်…. Registrant Email ပြောင်းလဲပါက Email confirmation ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်…
အခြားမှ ဝယ်ယူထားသော hosting Server နှင့် Z.com မှ Domain အား ချိတ်၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသလား?
အသုံးပြုနိုင်ပါသည်… Server ၏ IP နင့် အခြားသော DNS Record များအား point လုပ်ပေးရမည်…
Domain တစ်ခုကို ဘယ်နှနှစ်ထိ ဝယ်ယူသက်တမ်းတိုးနိုင်လဲ?
Domain တစ်ခုကို 1နှစ် မှ 10 နှစ်ထိ ဝယ်ယူသက်တမ်းတိုး၍ အသုံးပြုနိုင်သည်...
Domainရဲ့ Nameserver ကို Z.comမှ Nameserver မသုံးဘဲ တခြားNameserver သုံးလို့ရလား?
ဟုတ်ကဲ့ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ Nameserver ပြောင်းလဲရန်
Z.com Account ထဲသို့ Login ဝင်ပါ။
Title ပေါ်မှ Domain ကိုနှိပ်ပါ။
Nameserver ပြောင်းလိုသော Domain အား ရွေးချယ်ပြီး နှိပ်ပါ။
ထိုနောက် Nameserver Setting ကိုနှိပ်၍ [Custom] တွင် မိမိပြောင်းလိုသော Nameserver များအား ထည့်သွင်းပါ။
% Nameserver ပြောင်းလဲပြီး Update ဖြစ်ရန် အများဆုံး (72) နာရီခန့် အချိန်ပေးရသည်...
Building (18), 7th Floor, MICT Park, Hlaing Township, Yangon 11051